स्वास्थ्य पेज » रेमडिसिभिर कालोबजारी गर्ने नेपालगन्जका जावेद र हारुन पक्राउ रेमडिसिभिर कालोबजारी गर्ने नेपालगन्जका जावेद र हारुन पक्राउ – स्वास्थ्य पेज
रेमडिसिभिर कालोबजारी गर्ने नेपालगन्जका जावेद र हारुन पक्राउ
नेपालगन्जः कोरोना संक्रमित विरामीका लागि प्रयोग हुँदै आएको रेमडिसिभिर चर्को मूल्यमा विक्री गर्ने दुई जना नेपालगन्जका भएको प्रहरीले खुलाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार उनीहरुलाई आज विहान नेपालगन्जबाट पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ पर्नेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका-८ का २३ वर्षीय मोहम्मद जावेद अनसारी र अर्का नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका-११ का २५ वर्षीय हारुन अंशु रहेका छन् ।
बाँकेका एसपी ओम रानाले स्वास्थ्य पेजलाई दिइएको जानकारी अनुसार, उनीहरुले दुई भायल रेमडिसिभिर रु २५/२५ हजारमा विक्री गरिरहेका थिए ।
उनीहरुले पुष्ठभूमिबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीले उनीहरुमाथि रेमडिसिभिर कसरी लिए ? कहाँबाट लिए ? अहिलेसम्म कति विक्री गरे ?लगायतका बारेमा गम्भीर ढंगले अनुसन्धान गरिहेको जनाएको छ ।